Ungayisetha Kanjani Isiteshi Sakho Se-Youtube bese Usiphula! | Martech Zone
Ungayisetha Kanjani Isiteshi Sakho Se-Youtube Futhi Usichoboze!
NgoLwesihlanu, ngoJuni 17, i-2016 NgoLwesibili, ngoJuni 13, i-2017 Douglas Karr
Noma ushicilela kwezinye iziteshi zevidiyo njenge Vimeo noma iWistia, kusengumkhuba omuhle ukushicilela futhi nokwandisa ibhizinisi lakho 'Youtube ubukhona. I-YouTube iyaqhubeka nokuhola njengenjini yokusesha yesibili ngobukhulu njengoba abasebenzisi bacwaninga ukuthenga kwabo okulandelayo noma ukuthola ukuthi bangazenza kanjani izinto online.
I-YouTube yayijwayele ukuba yiwebhusayithi yokwabelana ngamavidiyo emuva ku-2006, abantu babejwayele ukwabelana ngamakati abo namavidiyo ahlekisayo asekhaya. Eminyakeni eyishumi kamuva, ukwenza amavidiyo ku-Youtube kungumsebenzi wesikhathi esigcwele wabadali abaningi. Kangangokuthi iYouTube ayiseyona iwebhusayithi, iyimboni enosaziwayo babo, izingqungquthela zaminyaka yonke, nemibukiso yemiklomelo. WeAreTop10
Nazi ezinye izibalo ezimangazayo ku-Youtube, ezivuselelwa u-2016
Ukufinyelela kwe-Youtube - #Youtube inabasebenzisi abangaphezu kwesigidigidi - cishe ingxenye eyodwa kwezintathu yabo bonke abantu abaku-Intanethi - futhi nsuku zonke abantu babuka amakhulu ezigidi zamahora ku-Youtube futhi bakhiqize imibono eyizigidigidi.
I-Youtube Millennial Reach - I-Youtube iyonke, futhi ngisho ne- # YouTube kuselula ifinyelela eminyakeni yobudala engama-18-34 kanye no-18-49 kunanoma iyiphi inethiwekhi yekhebula e-US
I-Youtube Global Reach - #YouTube yethule izinhlobo zasendaweni emazweni angaphezu kwama-88 nezilimi ezihlukene ezingama-76 (okubandakanya abantu abangama-95% kwi-Intanethi).
I-Youtube Mobile Reach - Uma abasebenzisi bekuYouTube, basebenzisa isikhathi esiningi ngeseshini ngayinye bebuka amavidiyo. Kuselula, iseshini yokubuka #Youtube emaphakathi manje isiyimizuzu engaphezu kwengu-40 futhi ngaphezu kwengxenye yokubukwa kwe- #YouTube kuvela kumadivayisi eselula
Ungayisetha Kanjani Isiteshi Se-Youtube Sebhizinisi
Le infographic ikuhamba kuwo wonke amasu abalulekile wokunquma ukuthi uzosibhekisa kanjani ngempumelelo futhi uhlanganyele izethameli zakho, uqambe igama nesiteshi sakho, uthenge imishini yekhwalithi yekhwalithi yomsindo neyevidiyo, ukhiqize okuqukethwe kwamavidiyo, ukhuthaze lokho okuqukethwe, futhi uzitholele wena noma ibhizinisi lamukelwa njengomkhiqizi wokuqukethwe we-Youtube.
Setha isiteshi sakho se-Youtube
Yenza umsebenzi omuhle futhi ungaqala nokuthola amasheke athile avela ku-YouTube! Ama -outubers aphumelele angenza phakathi kwamasenti ayishumi kuya ku- $ 6 ngokubukwa okungu-1,000 50! Inani leziteshi ezihola izibalo eziyisithupha ngonyaka ku-Youtube likhuphuke ngama-XNUMX% ngonyaka ngaphezu konyaka.
Tags: siphezulu kwabayishumiweetheopyoutubeokuqukethwe kwe-youtubeukumaketha kwe-YouTubeiselula ye-youtubeUkulungiswa kwe-youtubeizibalo ze-youtubeamasu we-youtube
UJun 18, 2016 ngo-4: 30 AM
Amaphuzu amahle impela futhi njengoba ushilo, ukuqamba isiteshi kahle lapho izithameli eziqondiwe zingazichaza khona kubalulekile. Sesizoqala nje isiteshi sethu sokufundisa nge-Digital Marketing kanye ne-SEO futhi sibheke phambili ekucabangeni ngokujulile kusiphakamiso ngasinye osithumele lapha, yize inhloso yethu eyinhloko evela esiteshini / kumavidiyo e-YouTube ingahluka kancane. Siyabonga ngokushicilela lokhu okuthunyelwe kanye nemininingwane yolwazi.